------------English Version Below-------------
Plastic Lumber တွေကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတာ သိကြလား?
အခုဆိုရင် တော်တော်များများက Sustainable ဖြစ်တဲ့ decorations တွေကို အသုံးပြုလာကြတဲ့အတွက် Plastic Lumbers တွေကို သုံးပြီး ပြုလုပ်ထားတဲ့ အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ decorations တွေကို နေရာတော်တော်များများမှာ တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ Plastic Lumbers တွေကို အလှဆင်တဲ့နေရာတွေနဲ့ စားပွဲခုံ ထိုင်ခုံတွေသာမကပဲ တခြားနေရာအမျိုးမျိုးမှာလည်း အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကို မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပြောပြပေးမယ်နော်။
Plastic Lumbers တွေကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးပြုနေကြလဲဆိုရင်တော့ -
၁။ စပျစ်ခြံ၊ မွေးမြူရေးခြံတွေမှာ ကာထားတဲ့ ခြံစည်းရိုးတွေနဲ့ တိရစ္ဆာန်တင်းကုပ်တွေလိုမျိုး စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ
၂။ နံရံများ၊ အသံကာပေးတဲ့ အသံကာအတားအဆီးများ၊ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တွေနဲ့ လူသွားလမ်းတွေလိုမျိူး မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ
၃။ ခြံစည်းရိုးများ၊ ပန်းအိုးများနဲ့ အမှိုက်ပုံးတွေလိုမျိူး ပန်းခြံသုံး ပစ္စည်းများ
၄။ စက်ရုံနဲ့ ဂိုဒေါင်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတင် အောက်ခံ ပဲလက်ပြားများနဲ့ ထရပ်ကားအခင်းတွေလိုမျိူး စက်ရုံနဲ့ ဂိုဒေါင်သုံးပစ္စည်းများ
၅။ ကားမှတ်တိုင်၊ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ ကားအရှိန်လျှော့ပေးတဲ့ လျှောစောက်ဂုံးတွေလိုမျိုး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ
၆။ တံတားများနဲ့ တံတားတိုင်လုံးများ၊ ရေကာတာများနဲ့ လှေဆိပ်တွေလိုမျိုး ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ စတဲ့နေရာတွေမှာ အခုဆိုရင် အသုံးပြုလျက်ရှိကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
တကယ်လို့ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ sustainable ဖြစ်စေရေးကို ဦးစားပေးပြီး သစ်သားအစားထိုး Plastic Lumber ဘုတ်ပြားတွေကို မိမိစိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းများဖြင့် လူသုံး၊ အိမ်သုံး၊ ကျောင်းသုံး၊ ရုံးသုံး ပစ္စည်းများအတွက် အသုံးပြုလိုပါက RecyGlo မှ Plastic Lumber ဘုတ်ပြားများကို ဝယ်ယူလို့ရပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။ RecyGlo မှ Plastic Lumber ဘုတ်ပြားများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 09 404 245 800၊ 09 263 223 496 တို့ကိုဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပြီး E-mail မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်လိုပါက contact@recyglo.com နှင့် communication@recyglo.com တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
RecyGlo မှာရနိုင်တဲ့ services တွေကို လေ့လာလိုပါက RecyGlo ရဲ့ Official website ဖြစ်တဲ့ www.recyglo.com နှင့် Facebook Page ဖြစ်တဲ့ RecyGlo Myanmar တို့မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Nowadays, more and more people are using sustainable decorations, we can see that accessories and decorations made of plastic lumber in many places. Plastic Lumbers can be used in many places, not only in the process of making chairs and tables and in decorations.
1.Agricultural components like vine stakes, ranch fences, gates, and animal stalls
2.Civil Engineering components like retaining walls, sound barriers, car stops, and walkways
3.Gardening products components like fences, flower pots, and compost bins.
4.Industrial products components flooring, pallets, and truck flooring.
5.Transportation components like noise barriers, signposts, car stops, and speed bumps.
6.Marine Engineering components like piers, pilings, seawalls, and boat docks.
If you tend to be sustainable and want to customize products for your office, home, and school with plastic lumbers, the good news is that you can now buy Plastic Lumber boards from RecyGlo. For more information on RecyGlo Plastic Lumber Boards, please call 09 404 245 800 and 09 263 223 496 or contact us by email at contact@recyglo.com and communication@recyglo.com. To learn more about the services available at RecyGlo, visit RecyGlo’s Official Website www.recyglo.com, and RecyGlo Myanmar Facebook Page.